डा. हिमाल धामीले ल्याए तीज कोशेली ‘भिर मौरीको मह’ – Everest Dainik – News from Nepal
डा. हिमाल धामीले ल्याए तीज कोशेली ‘भिर मौरीको मह’
लोकेश बुङ्ली, काठमाडौं । हिमाल धामी पेशाले दन्त चिकित्सक हुन् । अब भने उनी दन्त चिकित्सक मात्रै होइनन् । उनको परिचय थप बढेको छ । अब उनी गीतकारसमेत बनेका छन् । हुन त उनी पहिलेदेखि नै गीतहरु रचना गर्थे । तर, अहिलेसम्म उनका गीत स्रोता तथा दर्शकले हेर्न र सुन्न पाएका थिएनन् । अब भने स्रोता तथा दर्शकले लामो समयपछिको प्रतिक्षा पूरा गर्ने भएका छन् ।
गीतकार डा. धामीको पहिलो कोशेली अहिले बजारमा आएको छ । उनले हिन्दु महिलाहरुको महान् पर्व हरितालिका तीजको अवसरमा एउटा मन छुने गीत बजारमा ल्याएका हुन् । उनले पहिलो गीतकोरुपमा स्रोता दर्शकमाझ ‘भीर मौरीको मह’ ल्याएका छन् । भीर मौरीको मह कतिले चाख्ने मौका पाउनु भएको छ ? अनुमान गरौं धेरैले स्वाद लिन पाउनु भएको होला ! चाख्नु भएको भए भीर मौरीको महको याद अहिलेसम्म आइरहेको हुनसक्छ । हो गीतकार धामीको ‘भीर मौरीको मह’ पनि त्यत्तिकै ‘टेस्टी’ छ ।
‘यसपालीको तीजमा मह चखाउँछु’ यो गीतको अहिले अडियो मात्र स्रोताले सुन्न पाउनु भएको छ । केही दिनमा यसको म्यूजिक भिडियो पनि हेर्न पाउनु हुनेछ । गीतकार धामीले भने, ‘पहिलो गीत भएकाले सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो । अहिलेसम्म अडियो सार्वजनिक भएको छ, केहि दिनमा म्यूजिक भिडियो पनि बजारमा आउने छ ।’
बझाङ जस्तो विकट ठाउँको झन दुर्गम साविकको ब्याँसी गाविसमा जन्मिनु भएका धामी सानैदेखि गीत संगीतमा रुचि राख्थे । भैसीँ गोठोला हुँदा होस् या वन पाखा जाँदा उनी गीत संगीतमा खूबै रम्ने गर्दर्थे । भैसीँलाई लिएर खर्क गएका बेला रमाइलोको याद गीतकार धामीलाई अहिले जस्तै लाग्छ । उनी खर्क जाँदा गीत गाएको यादहरु बेलाबेलामा सम्झीन्छन् ।
डा. धामी बाल्यकाल स्मरण गर्छन्, ‘स्कूलको छुट्टी मिल्ने वित्तिकै सानोमा गाइभैसीँ गोठालो खूबै गइन्थ्यो । घनघोर जंगलमा साथीहरुसँग देउडा चल्थ्यो । कलिहेकाहीँ साथीहरुसँग मिलेर नै भेरीको मह पनि निकालिन्थ्योे । त्यो भेरीको महको स्वादले साह्रै झझल्को दिन्छ । मौरीले कति दिन टोक्यो पनि । तर, मह चोर्न छोडिएन ।’
डा. धामीले त्यहि बाल्यकालमा भोगका विभिन्न रमाइला क्षणहरुलाई टपक्कै टिपेर अहिले ‘भिर मौरीको मह’ गीत ल्याएका हुन् । गीतकार धामीले भने, ‘म एक दन्त चिकित्सक, मसँग समय नै हुँदैन । तर, पनि ‘जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय’ आफूले चाहना राखेपछि हुँदो रहेछ । मैले थोरै समय निकालेर भएपनि गीत संगीतलाई समय दिइरहेको छुँ, त्यसैको परिणाम हो ‘भीर मौरीको मह’ ।
हिमाल धामी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, गीत, संगीत तथा अन्य गतिविधिमा सुनिने तथा देखिने नाम हो । तर, उनको वास्तविक नाम भने डबलबहादुर धामी हो । अर्थात डीबी धामी । उनी गाउँ घर तथा दाँतका रोगीमाझ डबलबहादुर उर्फ डीबी धामी भनेर परिचित छन् । धामीको ‘भीर मौरीको मह’ को सानो सुटिङको क्लिप यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ-
डा. धामी आफ्नो क्षेत्रको एक प्रशिद्ध व्यक्ति पनि हुन् । उनको नाम गाउँमा दाँतको डाक्टरको नामले परिचय छ । स्वयम् मैले पनि उनको नाम सानैमा सुनेको । उनलाई मैले दाँतको डाक्टरको नामले मात्रै चिनेको थिए । तर, आज दन्त विशेषज्ञ मात्रै नभएर गीतकारको नामले पनि चिन्ने मौका पाएको छु । यो मौका मजस्ता कयौंलाई मिलेको छ । धामीले आफ्नो बारे मात्रै नभएर गाउँ ठाउँका बारे पनि चिन्ता र चाँसो राख्छन् । आफ्ना ठाउँका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ उनी सचेत छन् । उनले आफ्नो मातृभूमिलाई प्रदान गर्न सक्ने सहयोग गरिरहेका छन् ।
डा. धामीले गाउँका वर्तमान समस्यालाई हल गर्न सम्बन्धित निकायलाई विभिन्न माध्यमबाट खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । विशेष गरि उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत गाउँ ठाउँका रैबार प्रदान गरिरहेका हुन्छन् । समस्यालाई समाधान उन्मुख बनाउन उनी तल्लीन छन् ।
डा.धामी दन्त चिकित्सक, गीतकार मात्रै होइनन्, उनी गायक पनि हुन् । उनले आफूले गाएको गीत नै बजारमा ल्याउन नसके पनि उनको आवाज मिठो छ । त्यहि मिठो आवाजमा स्रोता दर्शकले सायद छिट्टै गीत पनि हेर्न र सुन्न पनि पाउँछन् होला ।
डा. धामीले अहिले बजारमा ल्याएको तीज गीत ‘भीर मौरीको मह’ मा आफूले र्न गाउने सुरु बनाएका थिए । दुर्भाग्य त्यो पूरा हुन सकोन । उनी भन्छन्,‘ यो गीत म आफैंले गाउने भनेको थिए । तर, रेकर्डिङ गर्ने दिन नै असन्चो भयो ।’
केहि दिन अघि बजारमा आएको ‘भीर मौरीको मह’ मा आवाज दिपा रोकाया र सुरेश शाही रहेको छ । यस्तै, गीतमा लय तथा शब्द डा. हिमाल धामीको छ । केहि दिनमा आउने म्यूजिक भिडियोमा लक्ष्मी, डम्बर, करिस्मा, हिरोजको अभिनय देख्न सकिने गीतकार धामीले जानकारी दिए ।
ट्याग्स: Himal Dhami